विश्वविजेता जर्मनीलाई मेक्सिकोले चखायो हारको पहिलो नमिठो स्वाद ! - विश्वविजेता जर्मनीलाई मेक्सिकोले चखायो हारको पहिलो नमिठो स्वाद !
विश्वविजेता जर्मनीलाई मेक्सिकोले चखायो हारको पहिलो नमिठो स्वाद !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ४ असार, 12:50:10 AM
सन २०१४ को विश्वविजेता जर्मनी पछिल्ला कुनै प्रतियोगितामा पराजित भएको थिएन । यतिसम्मकी उसलाई बराबरीमा रोक्न पनि कुनै टिमले क्षमता देखाएका थिएनन । तर रुस विश्वकपको पहिलो खेलमै जर्मनीलाई मेक्सिकोले एक शुन्य गोलको हारको पहिलो नमिठो स्वाद चखाएको छ ।
समुह चरणको पहिलो खेलमा निकै फितलो प्रदर्शन गरेको जर्मनीका लागि नयाँ र स्टार देखिएका कुनै पनि खेलाडीले गोल गर्न सकेनन् ।
न त उसका विश्वविजेता गोलकिपर म्यानुअल नुयरले नै विपक्षीको प्रहार रोक्न सके । जर्मनीको पोष्टमा थुप्रै प्रहार गरेको मेक्सिकोका लागि हिरभिंग लोजानोले ३५ औँ मिनेटमा हानेको प्रहार जाली चुमेको थियो ।
त्यसपछि निकै आक्रामक देखिएको जर्मनीले मेक्सिकोको पोष्टमा २५ प्रहार हानेपनि गोल गर्न सकेन । जर्मनी पछिल्ला १३ खेलमा हारेको थिएन । मेक्सिकोको हारसँगै उसको विश्वकप उपाधि रक्षा गर्ने अभियानमा पनि गम्भिर धक्का लागेको छ ।
२०७५, ४ असार, 12:50:10 AM